Fardaha Trakehner, astaamaha nooca ugu quruxda badan | Fardaha Noti
Faraska Trakehner wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Bariga Prussia, gobol mar ka tirsanaan jiray Jarmalka, ka dibna Ruushka oo hadda ka mid ah Poland. Si kastaba ha noqotee, noocani wali waxaa loo yaqaanaa «Faraska Dhiigga kulul ee Bariga Prussian»
Waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn fardaha dhiig-diiran ee adduunka. Aad bay u yihiin la xidhiidha fuulista faraska waxayna muhiimad weyn ku leeyihiin aduunka isboortiga iyo labiska. Had iyo jeer waxaa jira tijaabooyin Trakehner oo ah tartamo caalami ah iyo kuwo qaran.
Miyaynu isaga ka yara fiicanahay?
Taranka Trakehner wuxuu soo hooyay guulo badan oo Olombikada ah, gaar ahaan labbiska iyo bandhig buuxa. Laakiin kuma eka oo kaliya isboortiga, waa faras aad ugu habboon wadista iyo wakhtiga firaaqada. Waxaan nahay markaa kahor isleeg isu dheelitiran.
Sida xaqiiqda xiisaha leh, magaalada Verden ee Saxony Hoose, waxaa ku yaal taallada Tempelhüter, oo ah caan caan ah oo caan ah.
Waxaan ka horreynaa qaar isku mid ah aad u qurux badan oo sharaf leh, oo leh dherer qallajinaya oo u dhexeeya 162 cm illaa 168 cm. Madixiisa, oo leh muuqaal toosan, si fiican ayaa loo dheellitiray oo wuxuu leeyahay weji ballaadhan iyo indho waaweyn. Kuwa ay addimada iyo kala-goysyada ayaa xoog badan oo ku dambeeya koofiyado adag. Intaa waxaa dheer, dhererka halkii gaaban ee usha ayaa ka dhigaysa mid u dhow dhulka.
Astaamo kale oo taranka ka mid ah ayaa iyagu ah gadaal awood badan, taas oo kaa dhigaysa inaad ku istaagto tartamada boodboodka showga.
El dhogorta ee noocyadan, waxay noqon kartaa mid ka mid ah lakabyada adag, oo muujineysa laabta, xabadka, xabadka madow iyo lakabyada madow.
Waxaa jiray waqti ka mid ah fardaha dhiigga diirran, sida cawdu su'aashu tahay, waxay ahayd arrin aan lahayn koofiyado cibaado badan. Trakehners ayaa laga reebay.
Xaqiiq kale oo xiiso leh oo ku saabsan dhogorta, bilowgii taranka taranka, midabka jaakaddiisa waa la tixgeliyey Waa hagaag, sida ay u kala duwan yihiin waxaa loo tixgeliyey inay leeyihiin kala duwanaanta astaamaha jir ahaaneed. Tusaale ahaan, marsooyinka lagu dahaadho xabadka ayaa la sheegay inay yihiin kuwo xasaasi ah, oo leh awood weyn iyo xarrago. Waxaa la rumaysnaa inay ka dhasheen Ingriis Thoroughbred Stallion iyo khadka kaliya ee ka imanaya Hanoverian breed oo ay aasaaseen trakehner stallion
Sida uu isagu dabeecad, mararka qaarkood waxay muujiyaan inay leeyihiin a xasaasiyad weyn, xoog iyo iska caabin. Tani waxay ka dhigtay inay caan ku ahaadaan farda adag, laakiin hoostooda waxay ku noqdaan xayawaan lagu kalsoon yahay.
Markii gobolka la gumeystay Amarka Teutonic Knights qarnigii XNUMXaad. Iin yar oo maxalliga ah oo la yiraahdo Schewiken ayaa bilaabay inuu tarmo. Waxay ahaayeen fardo ku istaagay iska caabintooda iyo dabacsanaantooda, kana yimid tartanka Konik iyo Tarpan-kii hore. Iskudhafyadan waxaa lagu tallaabay fardaha bariga iyo sidaas Faraskii Bariga Prussia wuu dhashay.
Si kastaba ha noqotee in laga hadlo rasmiga ah ee asalka, waa inaan horay usoconaa dhowr qarniyo hore. Daaran 1732, Frederick I oo reer Prussia ah wuxuu ka aasaasay beer faras kooreysan magaalada Trakehnen. Ujeedada noocani waxay ahayd inay u adeegto sidii buur loogu talo galay ciidanka isla mar ahaantaana lagu xushmeeyo nooca deegaanka: fardaha Schweiken. In la sameeyo, waxaa la go'aamiyay in laga gudbo isirka maxalliga ah iyada oo la adeegsanayo waddooyinka Ingiriisiga iyo Carabta. taas oo keentay nooca Trakehner iyo Trakehnen Stud.
Ilaa bilowgii Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, ciidamadu waxay heleen faras wanaagsan oo lagu nasto oo ay safraan waxayna rabeen inay sii wadaan raadinta sinnaanta la kulmi doonta dhammaan waxyaabaha ay ka filayaan: nooc u adkaysta dhibaatooyinka dagaalka, geesi u adkaysta sawaxanka dagaalka xanaaqa dembiga oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh waa inay ahayd sarkaalka saraakiisha. Intaas oo dhan, tartanku wuxuu ku dhammaaday qaab.
Marka laga soo tago in loo qoondeeyay inuu noqdo faras koorsada, beeralaydu waxay ogaadeen inuu yahay xayawaan leh shaqooyin wanaagsan oo wanaagsan isla markaana u baahan dayactir yar By habka bilaabay in la kiciyo sidoo kale sida faras shaqo taas oo ugu dhakhsaha badan u horseedi doonta inay u rogto faras qabyo ah oo qurux badan oo loogu talagalay gawaarida xulashada badan.
Marka waxaan la kulanay laba nooc oo isku nooc ah, laakiin labadaba leh xirfado wanaagsan sida faras koorsada. In yar oo yar labadan nooc way isku dhafanaayeen, iyagoo xoojinaya tartanka hadda socda ee Trankener.
Inta lagu jiro Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, Faraska Trakehner wuxuu lahaa a tiro aad u yar tijaabooyinka. Waxay ku dhacdey soosaarayaasha hawsha weyn ee maareynta si looga adkaado tirooyinka loona soo celiyo tayada taranka. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha cimilada adag iyo duulaanka ciidanka Ruushka ayaa dadka ka dhigay inay ka tagaan gurigooda iyo noloshooda. Sidaa darteed soosaarayaashu shaqadooda ma qaban karaan. Daaran 1944, Trakehnen istiinkiisii ​​weynaa waa la daad gureeyayQiyaastii 800 oo mareeg, xayawaanno iyo xayawaanno ayaa tagay Ruushka.
Waqtiga ay dadka Trakehnen awoodaan inay cararaan, kaliya faras yar oo faras ah oo ay si taxaddar leh u dhaleen ayaa badbaaday. Laakiin mahadsanid qaar ka mid ah soosaarayaasha, isirku wuxuu ku guuleystey inuu sii socdo maaha sidaas meesha uu ka soo jeedo, maadaama Trakehnen uusan jirin maanta.
Qaar ka mid ah cirbadyadan ayaa loo qaaday Kirov halkaasoo uu ka soo bixi lahaa Trakehner-ka Ruushka.
Inta lagu jiro Dagaalkii Labaad ee Adduunka, tartanku wuxuu ahaa markale halis ugu jira dabargoyn. Dagaalkii iyo abaartii ka dhacday Jarmalka waxay sababtay in dad badan oo isu eg ay u dhintaan ama loo gawraco hilib. Way badbaadiyeen markii tijaabooyin loo wareejiyay Jarmalka. Halkaas ayay iska diiwaangeliyeen oo ay bilaabeen in la dhaqdo, iyagoo helaya fardo aad isu dheellitiran. Sannadkii 1947-kii ayaa la aasaasay Urur-dhaqameedka iyo asxaabta Faraska Sangre Caliente ee ka soo jeeda Trakehner. Noocii ayaa bilaabay in la soo celiyo, laga bilaabo hel oo soo ururi muunadahaas badbaaday. Waxaan kugula talin lahaa Jarmalka Gesellschaft waxaa qoray Trakehner, hal urur si kor loogu qaado taranka taasi oo ku faafi laheyd aduunka oo dhan.
Trakehners waxay ahaayeen loo isticmaalay in lagu horumariyo noocyada kale ee tartanka tartanka sida ku dhacda fardaha Hanoverian.
Maanta waa a Tartanka sii kordhaya ee muunadaha iyo ku faafaya adduunka oo dhan. Tusaale ahaan Jarmalka, waxaa ka diiwaangashan ku dhowaad shan kun oo nuqul.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Fardaha Trakehner, astaamaha nooca ugu quruxda badan